प्रहरीले सूचनामा गलत ठेगाना दिएपछि निर्दोष व्यक्तिको परिवारले मानसिक यातना भोग्दै | PBM News.com
चितवन ८ असार । चितवन प्रहरीले २ युवती सहित ६ जनालाई लागुऔषधको कारोवारमा संलग्न भएको आरोपमा भरतपुरवाट पक्राउ परेको समाचार हिजो सार्वजनिक भयो । तर समाचारमा उल्लेख भएको व्यक्तिको ठेगाना गलत हुँदा अर्को व्यक्तिले मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ ।
नवलपुर वडा नं. १६ ( बेल्डीहा) बस्ने १९ वर्षिया बविता महतोको नाम जोडिएको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै बेल्डीहा बस्ने उही नाम गरेकी झण्डै उहि उमेरकी युवतीसँग मले खान गयो । जस्का कारण उनको परिवारले मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ । विभिन्न ठाउँबाट फोन आउने, घरमै आएर छोरीको बारेमा सोधिखोजी गर्न थालेपछि उनको परिवार अनावश्यकमा मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ ।
बेल्डीहा नवलपुरको वडा नं. १३ पर्दछ । झरही खोलादेखि वारी र बेल्डीहा पुल पारीको भाग वडा नं. १६ मा पर्छ । तर समाचारमा वडा न. १६ सँगै बेल्डीहा जोडिएकाले बेल्डीहामा बस्ने ति युवतिको परिवारले मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ । यो समाचार चितवन प्रहरी कार्यालयबाटै सार्वजनिक भएको हो । प्रहरीले दिएको सूचनामा ठेगाना गलत भएपछि अर्को निर्दोष परिवारले मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ । सम्बन्धित परिवारले ठेगाना सच्याउन भनेको छ ।
सुराकीको आधारमा प्रहरीले भरतपुरवाट २ युवती सहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । असार ५ गते राती भरतपुर महानगरपालिका–२ विक्रम मार्गबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुसँगै एउटा बोलेरो गाडी पनि प्रहरीले नियन्त्रण्णमा लिएको छ ।
ना ४ प ४४३९ नम्बरको बोलेरो चेकजाँच गर्ने क्रममा लुकाईछिपाई ल्याईएको विभिन्न प्रकारका लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
पूर्वकप्तान सागर थापासहित ५ जनालाई सर्वोच्चले पनि सफाइ दियो